အိမ်နှင့်ခြံ ရောင်းမည် | Myanmar Property Listings
Home » Property » အိမ်နှင့်ခြံ ရောင်းမည်
Address: ရူ့ခင်းသာမြို့ပတ် ၂ လမ်း မ ပေါ်ခိုင်ရွှေဝါမှတ်တိုင်အနီး (၇)အရှေ့ရပ်ကွက်သာကေတ . 40 X 60 , RC 7RC၂ထပ်Materbed roomမပါ Total5bed room အိမ်အကျယ်က၃၀ x ၅၀ . ဂရမ် အမည် ပေါ က်.Bus available 62. 34 , 106.
Contact Number: Contact Number : Ko Ye Aung ( @) Khin Mg Aye 09254110337
Email Address: than.aung1969@gmail.com
Listed: February 1, 2014 2:53 pm
ရူ့ခင်းသာမြို့ပတ် ၂ လမ်း မ ပေါ်ခိုင်ရွှေဝါမှတ်တိုင်အနီး (၇)အရှေ့ရပ်ကွက်သာကေတ . 40 X 60 , RC 7RC၂ထပ်Materbed roomမပါ Total5bed room အိမ်အကျယ်က၃၀ x ၅၀ . ဂရမ် အမည် ပေါ က်.Bus available 62. 34 , 106. Requested price 4000 lakh
Ad Reference ID: 35252eca65287280
Listed by: Than Tun Aung
Other items listed by Than Tun Aung
Latest items listed by Than Tun Aung »
All times are GMT 6.5. The time now is 5:19 am.